विचार/ब्लग « Light Nepal
नेपाल आमा ‘देशलाई हलन्दास कुपुत्र हैन, ८–१० ह्यारी चाहिएको छ’
हाम्रा राजकुमार पारसलाई गाजाको विकास गर्न फुर्सद नै छैन । बेलायती राजकुमार ह्यारीले नेपालमा आएर मानवता देखाए । उनले मानवता मात्र देखाएनन उच्च कुलघरानीयाले पपनि पसिना बगाउन हुन्छ भनेर सवक
ईतिहासमा नेपालले चीनलाई यसरि गुन लगाएको थियो
नेपाल–चीन सीमा सन्धि २०१८ असोज १९ गते भएको थियो । त्यसमा पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ जाने उल्लेख गर्दै दक्षिणतर्फ नेपाली क्षेत्र र उत्तरतर्फ चिनियाँ क्षेत्र रहने उल्लेख छ । सो सन्धिको दफा
अहिले सम्पूर्ण नेपालीको हाइ-हाइ पाएका ह्यारीको बिबादस्पद बिगत जुन धेरै नेपालीलाई आजपनि थाहा छैन!
नेपालमा रहिरहँदा उनका व्यवहारको खुलेर प्रशंसा भैरहेको छ । ह्यारी किन हरि भएर नेपालमा जन्मिएनन भन्ने खालको प्रतिक्रिया अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ । तर यो भनिरहँदा उनको विगत
गुगोलले सगरमाथा चिनमा देखाएपछी चिनिया लेखिका ‘मुइ चुँग’ ले लेखिन्,भारतियहरू मौका पाउने वितित्कै यस्तो घिनलाग्दो काम गर्छन
अंग्रेजीमा माउन्ट एभरेस्ट र चिनियाँ भाषामा चोमोलुङ्माको नामले तिब्बत र चीनमा चिनिने विश्वकै अग्लो यो हिमालकै कारण नेपाल विश्वभर चिनिएको छ । वैज्ञानिक मापन अनुसार ८ हजार ८ सय ४८
प्रकाश कोइरालाको दाबी राजतन्त्र फर्किने , प्रम ओलीले ३० बर्ष यताकै ठुलो काम गरे
वीपीपुत्र प्रकाश कोइराला झट्ट हेर्दा आफ्नै पिताजस्ता देखिन्छन् । उनको बोलीचाँहि ठ्याक्कै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो छ । तर, उनी गिरिजाप्रसादले लिएको नीतिको खरो आलोचक हुन् । धापासीस्थित कोइराला निवासमा पुग्दा
जुनदिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ , हाम्रो पैसा बैंकमा नै रहन्छ । हामी जिउँदो हुँदा लाग्छ हामिसित खर्च गर्न पर्याप्त धन छैन। जब हामी जान्छौ तब धेरै धन बिना खर्च नै
दरबार हत्याकाण्ड: प्रम गिरिजा उक्तदिन दरबार नगयकाले बचेका थिय, शब-यात्रामा पनि भएको थियो हत्या प्रयास! –
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला शयन कक्षमा गएसँगै वालुवाटारमा रातिको ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मी र सहयोगीबाहेक अधिकांश सहयोगी घर फर्किए । २०५८ जेठ १९ गते राति १० बजेर पाँच मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्रीका निजी
१६ वर्षकी मेरी छोरी स्कुल पढ्न जान्छे, केही काम गर्दिन’, उनले आफ्नो अगाडि उभिएका १५-१६ वर्षका किशोरीतिर देखाउँदै भनिन्, ‘यी त बेरोजगार हुन्, मैले रोजगारी दिएकी पो हुँ त।’ काठमाडौं
कहिल्यै रुद्राक्ष मालामा भएका रुद्राक्षदाना गन्नुभएको छ? विवाहमा स्वयंवर गर्दा दुलहादुलहीले लगाउने मालामा भएका फूलका थुङ्गा गन्नुभएको छ? गन्नुभएको छ भने थाहा हुनपर्ने कि त्यहाँ १०८ वटा रुद्राक्षदाना र १०८
हामीलाई नयाँ शक्ति हैन सगरमाथाको सिर, बुद्दको छाती भएको हाम्रो र राम्रो देश चाहिएको छःडा. बाबुराम
सुमन कार्की इजरायल – समय आफ्नै गतिमा दौडी रहेको छ । हरेक क्षण नयाँ पलको सुरुवात हो । जीवन यीनै नयाँ नयाँ पलहरुको संघार टेकेर चलि रहेको हुन्छ । हरेक